Chii chatingaite nemari yedu yatakachengeta zhizha rino? | Ehupfumi Zvemari
Zhizha rinosvika rimwezve gore uye nenguva yenguva iyo yakagadzirirwa kuzorora nekuzorora. Isiri nguva yakanakisa yekudyara mumisika yemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zviri zvakanyanya kuratidzwa kune kusagadzikana sezvo kumanikidzwa kwekutengesa kuri kuitirwa mutengi. Izvi zvagara zviri chiitiko mumakore achangopfuura uye chiri chinhu chakatungamira varimi vazhinji kuti vagadzirise zvinzvimbo zvavo mumisika yemasheya.
Mune ino mamiriro akapararira, hapana imwe sarudzo kunze kwekutsvaga dzimwe nzira dzinogutsa uye dzinogutsa dzekuchengetedza mari zvivimbiso zvikuru zvekubudirira. Kunyangwe iri mumamodeli ekudyara ane pfupi pfupi nguva yekugara uye kazhinji kazhinji inovhara mwedzi mitatu yemwaka wezhizha. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kunakidzwa neako anokodzera zororo nerunyararo rukuru rwepfungwa. Pasina kuve nekuziva nezve mitengo yezvibvumirano zvemari midziyo.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti mumwedzi iyi iyo kondirakiti vhoriyamu yekushanda mumisika yemari yakaderera zvakanyanya. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kutora njodzi yakawanda munzvimbo dzakashama pane aya akakosha mazuva egore. Saka kuti iwe ugone kugadzira aya marongero ekudyara, isu tiri kuzokupa iwe nemamwe mazano ekuti utungamise yako inowanikwa capital. Nekuchinjika kukuru mune zvaunogona kuita kuti uvandudze chiyero chejeti account yako munguva ino yegore.
1 Hire inoisa muzhizha
2 Bank promissory manotsi seimwe nzira
3 Ndarama inotengesa homwe
4 Chikwereti cheveruzhinji: zvakachengeteka kwazvo
5 Kuwedzera nema waranti
6 Yekupedzisira sarudzo: kuva mune zvemari
Hire inoisa muzhizha
Imwe yedzakanakisa nzira dzekumisikidza mari mumwedzi yezhizha inogadzirwa kuburikidza neyakagadziriswa-nguva bhangi dhipoziti. Nezve kugara kwemwedzi mitatu inova nguva chaiyo inogara muzhizha. Iyi sarudzo inogadzira purofiti padyo ne0,5%. Ehezve haina kunyanya, asi zvirinani ichatibvumidza kuti tisarasikirwe neyuro euro pane edu ekudyara. Nezvakanakira icho chiri chekubhengi chigadzirwa chisina makomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira kwayo kana kugadzirisa.
Kune rimwe divi, iwo mukana chaiwo wekuwana a yakagadziriswa uye yakavimbiswa purofiti mumwedzi iyi. Chero chii chinoitika mumisika yezvemari, uye kunyanya mumisika yemari. Zvekuti mushure memwedzi iyi unogona kutangazve kuisa mari mumisika yemari zvakare. Kamwe apo misika yemasheya yajekeswa uye iwe unogona kuve nesarudzo iri nani yekuita kusevha kunobatsira nenzira inoshanda zvakanyanya kupfuura kusvika zvino. Iko kwavanogona kutemerwa nezvivimbiso zvakakura zvekubudirira panguva yekuumba rinotevera rekudyara portfolio. Yakagadzirirwa nguva dzese dzekusingaperi.
Bank promissory manotsi seimwe nzira
Ichi chigadzirwa chinofarirwawo zvakanyanya kuti chigone kunyoreswa mumwedzi yezhizha. Izvo zvakafanana chaizvo nemabhangi, asi nemusiyano wakakura. Uye chii chinonzi mubereko uchabhadharwa panguva imwechete iwe unozvimisikidza uye kwete kana zvapera, sezvinoitika neakagadziriswa-term deposits. Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa kuti kwavo kondirakiti kwakanyanya kuchinjika pane zvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza. Nezve mazwi anotangira kubva pamazuva mashoma kusvika kumakore akati wandei mukureba uye kuita kwawo kuri kukura zvakanyanya kusvika kusvika pakatenderedza 1,50%.
Nekudaro, manotsi ekuvimbisa kubhengi ane dambudziko hombe uye nderekuti iwo haana kufukidzwa neanonzi dhipoziti garandi mari. Izvi zvinoreva kuti kana chinhu chikabhuroka unogona kurasikirwa nemari yese yakasimwa muchigadzirwa. Nezve iyo njodzi yako yakakura pamberi pechiitiko cheichi chimiro. Pasina chiyero chemubereko chavanopa chiri chinokwezva chaizvo kupokana neichi chikamu chatataura nezvacho. Semhedzisiro yezvipo zvese izvi, chokwadika inogona kungoshandiswa kuisimbisa kwemwedzi mishoma, chaizvo iya yezhizha.
Ndarama inotengesa homwe
Kana parizvino paine mari yemari inomira kupfuura zvese, izvo zvimwe kunze kwesimbi yeyero. Iine yakajeka yakajeka yepamusoro gore rino uye izvo zvinoita kuti ive inonakidza kwazvo kune vashoma nepakati varimi. Sezvo kune rimwe divi, zvakaoma kwazvo kuisa mari mugoridhe, chinhu chinonyanya kukurudzira ndechekuti iwe unoteya muhomwe yakanyorwa yezvinhu izvi uye kuti iwe unogona mhan'ara hombe capital capital mumwedzi mitatu inotevera. Kubudikidza nechigadzirwa chiri musanganiswa pakati pezvemari pamwe nekutenga uye kutengeswa kwemasheya mumisika yemari. Asi nemakomisheni ayo ari echokwadi anodhura zvakanyanya kune zvako zvaunofarira.
Seye inonyanya kufarirwa nzvimbo yakachengeteka, iri inishuwarenzi yemari dzinoitwa nevatengesi. Kunyanya zvakanyanya, sekupokana kune inosimbisa dhora kubva kuUnited States, iyo yatiri kuona ichikwira ichikwira uye iri kukonzera simbi yegoridhe kuwana simba mumisika yemari. Kune rimwe divi, chero kururamisa kunopihwa kune vanoita mari ndiwo mukana chaiwo wekutenga. Iyo ndeimwe yemari yemari ine yakanakisa chimiro uye iyo inogadzira yakanyanya inokurudzira kukura yekugona kwemwedzi yezhizha.
Chikwereti cheveruzhinji: zvakachengeteka kwazvo
Ichi ndicho chigadzirwa chehupenyu hwese kune anonyanya kuchengetedza profiles. Iwo hunhu yakaburitswa pamutero nokudaro, mutengo wayo wekuwana wakadzikira pane iwo muyero uchagamuchirwa nemusimari panguva yekuregererwa Musiyano uripo pakati pekukosheswa kukosha kweBill (chiuru euros) nemutengo wayo wekuwana chichava chimbadzo kana goho rinogadzirwa neHurumende yeMari. Sezvo ari ekuchengetedzeka kwenguva pfupi, misiyano pamutengo wavo pamusika wechipiri kazhinji idiki kwazvo; nokudaro, vanoisa njodzi yakaderera kumushamari uyo anotarisira kana angangoda kutengesa machengetedzo aya pamusika vasati vakura.
Parizvino, Treasury inopa Treasury Bills netemu yekugara zvachose kwemwedzi mitatu chete, chero bedzi mwaka wezhizha uchiripo. Ivhareji yemutero weichi chigadzirwa chakasarudzika chemari iri pedyo ne3% mumusheni wekupedzisira. Iko kusashanda zvakanaka asi zvinokutendera iwe kuti usvike mwedzi waGunyana pasina manhamba matsvuku muaccount yako wega. Kune rimwe divi, uye semanotsi ebhengi ekuvimbisa, iwe uchagamuchira kufarira panguva imwechete iyo chibvumirano uye kwete pakukura. Chinhu icho pasina mubvunzo chinokutendera iwe kuti uve nemari yakawanda mumwedzi iwe paunoronga zororo rako uye uko kune zvakare kune zvimwe mari.
Kuwedzera nema waranti
Iko kune sarudzo iyo inongochengeterwa chete ane hasha ekudyara profiles uye iri kuburikidza nechigadzirwa chakakosha seicho chakagadziriswa nezvibvumirano. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda mumwedzi mitatu iri pamberi, asi nenzira imwechete kurasikirwa nayo sezvo njodzi iri imwe yemaitiro ayo makuru. Nekuti inopa iyo yakakwira nhanho yekuwedzera kupfuura muzvigadzirwa zvasara zvekudyara mumisika yemari. Iyo zano mune ino kesi inofanirwa kuve yakanangana nekutarisa kumatokisi ane mucherechedzo wekumusoro maitiro, zvirinani yakanangana nepfupi nepakati nepakati.
Mvumo ndeyemhando dzekudyara dzinozivikanwa neadzo kusagadzikana kukuru uye nekuti inogona kuve mhinduro yenguva pfupi kumatambudziko ako ekudyara muzhizha rino. Kunyangwe isu tichiomerera chete kune vanoita mari neine hasha mbiri. Iko kwavanogona kugovera mari shoma kusvika mwedzi waGunyana uye nekutarisisa kwakakosha mashandiro akagadzirwa kubudikidza nezvigadzirwa zvemari izvi zvinoita kuti vagadzire zvinzvimbo zvine marimendi epakati. Naizvozvo, chenjera chaizvo neiyi sarudzo yekudyara yatinokurudzira.
Yekupedzisira sarudzo: kuva mune zvemari
Chero zvazvingaitika, panogara paine sosi yekutora mukana kubva kumwedzi yezhizha yakamirirwa kwenguva refu kuti ugozvipa iwe nekuwanda pamberi pemari iri pamberi. Kwete pasina, chichava chimiro chekusanetseka pamusoro pezvichaitika panguva ino mumisika yezvemari, zvese zvakagadziriswa uye zvinowaniswa mari. Iko kwaunogona zvakare kuve mukana wekugadzirisa zvigaro mumusika wemasheya uye kunakirwa nemari inowanikwa yakaunganidzwa kusvika panguva ino. Muchiitiko chekuti pavepo, zvinoshanda sechikonzero chose chekubva kumisika yemari kwenguva yakati rebei kana shoma.
Kune rimwe divi, uye sekupfupisa, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ino inguva yekuchinja kana kutenderera mari yekuchengetedza mari. Chero izvo zvinhu kana zvigadzirwa zvemari izvo zvawakaumbwa panguva ino. Nedonzvo rekutanga rekuzvigadzirisa munguva pfupi nepakati nepakati uye kupfuura mamwe marudzi ekufunga kwehunyanzvi. Izvo zviri kumagumo ezuva izvo zvinosanganisirwa mune chero mhando zano munzira inogara iri yakaoma nyika yemari uyezve kudyara. Zvichienderana neprofile iwe yaunopa sewe investor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chatingaite nemari yedu yatakachengeta zhizha rino?